Karaman'ny mpitondra ambony: Ilaina ny mangarahara
samedi, 02 février 2019 09:35
Fanambin'izao fitondrana vaovao izao ny ady amin'ny kolikoly, ny fisian'ny mangarahara.
Hita ihany koa ny finiavana hanaja ny lalàna ary nizotra niaraka nanao fanambaram-pananana teo anivon'ny HCC, izay izy ireo no mandefa izany any amin'ny Bianco.
Toy ny firenena mandroso rehetra, dia tsara ampahafantarina ny be sy ny maro izany ahitan'ny rehetra ny fananana teo ampiandohana, sy ny fitombon'ny fananana isan-taona, satria ny fiaraha-monina no tena mahita ny fiaimpiainan'ireo mpitondra, ny tena fananany marina sy izay afenina (train de vie, patrimoine réel et patrimoine déclaré).
Tsara ihany koa ny ahafantaran'ny rehetra ny karaman'ny Filoham-pirenena, ny Praiminisitra, ny Député, ny Hcc, ny CENI, ireo minisitra sy ny Talé Jeneraly, na minisitera na orin'asam-panjakana, ireo lehiben'ny Fitsarana sy ireo mpitsara sy izay mandrafitra ny Andrim-panjakana rehetra. Ireo Lehiben'ny Faritra, Ny Ben'ny Tanàna, ny Préfet, Ireo Miaramila, Zandary, Polisy ambony, ireo Mpiandry ala sy Mpiandry Fonja.
Volam-bahoaka izy ireny ka mila fantatry ny vahoaka madoa hetra ny hikaramana azy ireo.
Hatreto raha ny fanadihadiana natao dia toy izao ny karaman'ny minisitra tamin'ny governemanta farany teo, talohan'izao vaovao izao:
Karama= 1 450 000ariary
Indemnités= 3 700 000ariary
Totaliny= 5 150 000 ariary (25 750 000fmg)
Tafiditra ao anatin'io daholo izay rehetra mety ho indemnités ary raha mahazo trano hipetrahana dia mihena io.
Tsara ihany koa ny fampatsiahivan'i Praiminisitra ankehitriny ireo lalàna efa nisy efa ela, fa tsy nampiharina momba ny fiara plaque rouge, sy ny tsy fahazoana mampiasa jiro mirehidrehitra, sy anjomara (pin pan), ankoatr'ireo lehiben'ny Andrimpan-jakana, sy ny fanajana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana, ka tsy hidirana làlana tsy azo aleha.
Nefa misy karazany ny fiaram-panjakana, ao ny voiture de fonction, izay omena ireo mpitondra ambony, ka azony entina na andro na alina, na hitondrany vady aman-janaka, manaja fenitra kosa na izany aza, fa tsy hitondrana saribao amidy sy anaovana bizina. Ary ao ny voiture de service, izay momba ny asa mivantana ihany no azo ampiasana azy, izany hoe matory parking ministera izany ny alina sy ny week-end.
Tokony asiana famantarana manokana anefa izy ireny anavahana raha voiture de fonction na voiture de service, ary asiana izay famatarana izay koa ny carte grise, ialana amin'ny hosoka plaque d'immatriculation, mba ho mora hitan'ireo mpitandro filaminana manakana misava ny ordre de route sy ordre de mission raha mivoaka ny faritra na ny fotoam-piasana ilay fiaram-panjakana.
Tokony hisy fanenjehana enjana na ireo mamadika ho vola ny ticket carburant, na ireo gérant station mitsikombakomba amin'izany.